Wiilkii Illaahay E-mail-ka U Diray!!(Sheeko Qiiro Leh Iyo Qalinkii Cabdiwahaab Axmed Cali) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Wiilkii Illaahay E-mail-ka U Diray!!(Sheeko Qiiro Leh Iyo Qalinkii Cabdiwahaab Axmed Cali)
Wiilkii Illaahay E-mail-ka U Diray!!(Sheeko Qiiro Leh Iyo Qalinkii Cabdiwahaab Axmed Cali)
Mid kamid ah odayaasha magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar ayaa dhalay wiil yar oo ilaahay ugu deeqay Maskax furan iyo caqli hufan; mar walba wuxuu uga sheekeyn jiray odayga wiilkiisa yar Waynida Alle iyo in la jeclaado.
Maalin maalmaha kamid ah ayuu odaygii xanuunsaday, gurigii waxaa buuxiyay dadkii deriska iyo asxaabtiisii, qof walba marka uu sii kasoo baxayo wuxuu yiraahdaa “Allaha Caafiyo aabbe”.
Dhagaha wiilka waxaa ka bad badtay Eraygaas iyo erayo lamid ah; wuu xasuustaa in aabbihiis markii hore ku dhiiro gelin jiray in uu jeclaado Alle (Swt) sidaa darteeda wuxuu go’aansaday in uu ilaahay u baryo uuna kala hadlo sidii aabbihiisa uu u fiicnaan lahaa.
Garaadku dadka uma sinna, da’duna ma diiddo qofka in uu fakero, wiilka yar durba hooyadiisa ayuu waydiistay warqad, Hooyadii ayaa waydiisay wuxuu ka doonayo in uu ka sameeyo warqadda; wiilkii yaraa ayaa ugu jawaabay “Allaahay baan u qorayaa warqad si uu aabbahay u caafiyo” .
Aad bay ula fajacday hooyadii, ilbaxnimada kujirtay ayaa keentay in wiilka u fasaxdo dadaalka uu dhankiisa ka wado; kaddib warqad iyo qalin ayeey ku caawisay, deedna wuxuu bilaabay in uu Ilaahay u qoro warqaddan.
“Illaahayoow ii Caafi Aabbahay!”.
markii uu intaas sameeyay ayuu hooyadiisa ka codsaday In ay Boostada u raacdo, markale ayeey amakaag dhabannada la qabsatay, sidii hore oo kale go’aankiisa ayeey u tixgelisay.
Waxaa la isla aaday dhankii boostada, intii ay ku guda jireen Boostada hawsheeda mid kamid ah shaqaallaha Boostada ayaa arkay warqad ay ku qoran tahay
Wuuu yaabay intii uu awooday in uu gaarsiiyo hadalka ayuu durba nab ku siiyay, sidaas ayeey ugu dambeyn magaalada ku gashay, warbaahinnada ayaa war ahaan u qaatay, mid kamid ah Joornaallada Qaahira kaso baxa ayaa caddadkiisa hore kusoo qaatay qisadaas.
Dhanka kale xanuunka Wiilka Aabbihiisa wuu sii siyaaday, ugu dambeyn joornaalkii waxaa akhristay mid kamid ah dhakhaatiirta ugu wanaagsan ee magaaalda ugu heysta, wuxuu dareemay amakaag iyo layaab, Hasa yeeshe geestiisa ayuu ka galay geeddi socodkii reerkaas xalka loogu heli lahaa.
Dr-kiibaa go’aansaday in uu caawiyo wiilka yar, durba wuxuu la xiriiray qolyihii joornaalka, kaddib kuwii Boostada ayaa lagu xiray ugu dambeyn dhakhtarkii baa helay qoyskii.
Sidii uu u socday buu ka galay albaabka gurigooda, waxaa kahor yimid wiilkii yaraa wuxuuna waydiiyay cidda uu yahay dhakhtarkii baa ugu jawaabay “Allahay xaggiisa baa la iga soo diray,” Aad buu ula yaabay Hooyadiisa buu u sheegay, kaddib waa ay dareentay in warkoodii magaalada uu gaaray; dhakhtarkii ayaa guda galay hawshiisii ugu dambeyn waa uu ku guuleeystay, kaddib waxaa aabbihii loo shegay wixii uu sameeyay wiilkiisii, aad buu ula yaabay, una qariibsaday, balse mar walba haddii aad ilaahay ku xeran tahay farajku waa agtaada.
Qisadan waxa aan ka faa’iideyna in carruurta wanaagga lagu tarbiyadeeyo oo si wanaagsan loo abaabiyo, si hadhaw wax wanaagsan looga helo.
waxaa qoray Cabdiwahaab Axmed Cali.